Nooc Cusub oo Rakhiis ah Bacriminta Shirkadaha Mashiinka Qalabaysan iyo Warshad | YiZheng
Waa maxay Nooca Cusub ee Granulator Bacriminta Noolaha?
Nooca Cusub Granulator Bacriminta Dabiiciga ah waxaa si weyn loogu isticmaalaa granulation ee bacriminta dabiiciga ah. Nooc cusub oo ka mid ah granizer bacriminta dabiiciga ah, oo sidoo kale loo yaqaan mashiinka qulqulka qulqulka qoyan iyo mashiinka ka hortagga kacdoonka gudaha, ayaa ah kii ugu dambeeyay ee cusub ee ay soo saarto shirkadayada. Mashiinku ma awoodi karo oo kaliya inuu alaabo noocyada kala duwan ee walxaha dabiiciga ah, gaar ahaan qalabka fiber-ka adag oo ay adag tahay in lagu dhajiyo qalabka caadiga ah, sida cawska dalagga, haraaga khamriga, hadhaaga boqoshaada, haraaga daroogada, xaarka xoolaha iyo wixii la mid ah. Kala soociddu waa la sameyn karaa halsano ka dib, sidoo kale waxaa lagu gaari karaa saameynta ugu wanaagsan ee samaynta hadhuudhku ay ku yeelato aashitada iyo qashinka degmada.
Halkee laga soo saari karaa bacriminta dabiiciga ah?
Bacriminta Dabiiciga ah ee Ganacsiga:
a) Qashinka warshadaha: sida miraha mashiinka wax lagu shubo, qamadiga khalka, haraaga kasaafada, haraaga sonkorta, haraaga dhogorta, iwm.
b) Dheecaanka degmada: sida dhoobada webiga, dhoobada bullaacadaha, iwm. Waxsoosaarka ceyriinka waxsoosaarka wax soo saarka iyo kala soocida salka: ciidda silkworm, hadhaaga likaha, haraaga kelp, haraaga fosfoorik aashitada, hadhaaga saliida, dambaska cawska, budada qolofta, isla mar ahaantaana u shaqeysa, budada qolofta lowska, iwm.
a) Qashinka beeraha: sida Caws, Cunto soybeyn ah, Cunto cudbi ah, iwm.
b) Xoolaha iyo digada digaagga: sida digada digaagga, lo'da, adhiga iyo digada fardaha, digada bakayle;
c) Qashinka guryaha: sida qashinka jikada;
Mabda'a Shaqada ee Nooca Cusub ee Granulator Bacriminta Noolaha
Ku nooc cusub granulator bacriminta dabiiciga ah waxay isticmaashaa xoogga kicinta farsamada ee xawaaraha-xawaaraha sare iyo aerodynamics-ka ka dhasha inay si isdaba-joog ah isugu qasmaan, u kala gurtaan, u kala baxaan, u cufan yihiin iyo hababka kale ee budada ganaaxa ee mashiinka, si loo gaaro kala-soocid. Qaabka walxaha waa goobaaban yahay, cabirka walxaha guud ahaan waa inta udhaxeysa 1.5 iyo 4 mm, cabirka walxaha 2 ~ 4.5mm waa ≥90%. Dhexdhexaadiyaha qaybta ayaa si habboon loo hagaajin karaa iyada oo la isku darayo walxaha iyo xawaaraha dunmiiqa. Caadi ahaan, hoos u dhaca qaddarka isku-darka, ayaa sare u kacaya xawaaraha wareegga, qaybta yaryar, iyo qaybta ay ka weynaato.
Noocyada Nooca Cusub ee Granulator Bacriminta Noolaha
►Maqaarka sheyga ayaa ah kubad wareegsan.
►Waxyaabaha dabiiciga ah waxay ku sarreyn karaan 100%, samee granulo dabiici ah oo nadiif ah.
►Qaybaha maaddooyinka dabiiciga ahi way ku kori karaan xoog gaar ah, looma baahna in lagu daro wax laysku xidho. marka granulating.
►Maqaarka waxsoosaarka waa mid aad u tiro badan, si toos ah ayaa loo kala shaandheyn karaa granulation ka dib si loo yareeyo tamarta. isticmaalka qalajinta.
►Ka dib marka ay khidmadaha halsano uma baahna inay qalalaan, qoyaanka alaabta ceyriinka ah ayaa ku jiri kara. 20% -40%.
Khadadka Waxsoosaarka Nadiifinta Bacriminta Noolaha Teknolojiyada
Si loo daboolo baahiyaha Bacriminta baaxada weyn ee dabiiciga ah, WE Zhengzhou Yizheng Makiinado Culus Co., Ltd. si xirfadaysan u naqshadeeya una soosaara khadka soo-saarka bacriminta dabiiciga ah iyo mashiinnada ku habboon ee ku habboon agabyada kala duwan ee dabiiciga ah, kaasoo hoggaamiye u ahaa berrinka Shiinaha.
Soo Saarkii Sanadlaha ee Warshada Bacriminta Dabiicada Yaryar (300 Maalmaha Shaqada)
10,000 tan / sanadkii
20,000 tan / sanadkii
30,000 tan / sanadkii
1.4 tan / saacaddii
2.8 tan / saacad
4.2 tan / saacad
Soo Saarista Sanadlaha ah ee Warshad Bacriminta Dabiiciga ah
50,000 tan / sanadkii 60,000 tan / sanadkii 70,000 tan / sanadkii 80,000 tan / sanadkii 90,000 tan / sanadkii 100,000 tan / sanadkii
6.9 tan / saacaddii 8.3 tan / saacaddii 9.7 tan / saacaddii 11 tan / saacad 12.5 tan / saacaddii 13.8 tan / saacaddii
Soo-saarista Sannadlaha ah ee Beerta Bacriminta Dhirta-Weyn
150,000 tan / sanadkii 200,000 tan / sanadkii 250,000 tan / sanadkii 300,000 tan / sanadkii
20.8 tan / saacaddii 27.7 tan / saacaddii 34.7 tan / saacaddii 41.6 tan / saacaddii
Ka xor ah xayiraadaha xilliyeed iyo kharashyada hoose ee kuleylka aerobic
"Qashinka u rogo khasnad", ma lahan daaweyn xun, daaweyn aan dhib lahayn
Swareegga wax soo saarka hort ee bacriminta dabiiciga ah
Shawlgalka imple iyo maaraynta habboon
Nidaamka Shaqeynta Khadadka Soo-saarista Bacriminta Dabiiciga ah
Khamiirintu waa habka aasaasiga ah ee wax soo saarka. Qoyaanka, heerkulka iyo waqtiga ayaa u baahan in si adag loo xakameeyo. Compost Turner waa mashiinka bacriminta dabiiciga ah ee loo adeegsado in lagu dardar galiyo halsan-abuurka noolaha yar-yar iyo in la wanaajiyo tayada compost-ka.
Qalabka buruqda waa in la jajabiyaa ka dib geedi socodka halsano. Way adag tahay in arrinta looga dhigo granules gacanta. Sidan oo kale, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo burburka bacriminta. Waxaan kugula talineynaa macaamiisha inay doortaan qalabka qoyaanka sare mashiinka burbura, maadaama ay burburin karto walxaha semi-qoyan iyo waxtarka sare ee burburka.
Waa geeddi-socodka wax soo saarka muhiimka ah ee dhammaan khadka wax soo saarka. Marka loo eego shuruudaha kala duwan, nafaqooyinka waa lagu dari karaa. Qaybaha meeraha ah waa la shaqeeyaa, iyagoo keydsanaya tamar badan. Sidaa darteed, xulashada mashiinka bacriminta dabiiciga ah ayaa si gaar ah muhiim u ah. Nooca cusub ee granizer bacriminta dabiiciga ah ayaa ah mashiinka ugu habboon.
Ka dib marka la nadiifiyo, granules ayaa u baahan qalajinta. Qoyaanka bacriminta dabiiciga ah ayaa loo yareeyay 10% -40%. Mashiinka qoob-ka-ciyaarka durbaanka Rotary waa qalab lagu yareeyo qoyaanka qaybaha, kaas oo macquul u ah wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah.
In si loo hubiyo tayada, qayb ka waa in la qaboojiyo ka dib markii la qalajiyo iyadoo la kaashanayo mashiinka qaboojinta durbaan Rotary.
Waxaa jira bacrimin dabiici ah oo uumis ah inta waxsoosaarka la sameynayo. Waxay u baahan tahay mashiinka baaritaanka bacriminta bacriminta durbaanka si loo kala sooco alaabada la diiday iyo walaxda caadiga ah.
Mashiinka bacriminta bacriminta waxaa loo isticmaalaa xirxirida bacriminta la shaqeeyay. Waxaan u adeegsan karnaa mashiinka wax lagu rakibo si aan uxirxirno oo aan uxirino walxaha.
Nooca Cusub Soo Bandhigga Bacriminta Nadiifiyaha Muuqaalka Video-ga ah
Nooca Cusub Xulashada Naqshadeynta Bacriminta Nooca Organic
Moodooyinka qeexitaanka granulator waa 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 iyo qeexitaano kale, oo waliba loo habeyn karo iyadoo loo eegayo baahida dhabta ah.
Cabbirka Granule (mm)
Cabirka (L × W × H) (mm)
Hore: Roll Extrusion Xarunta Bacriminta Granulator
Xiga: Rotary Drum Xarunta Bacriminta Granulator